ရိုက်တာအမှု ဒုတပ်ကြပ် နိုင်လင်း သက်သေထွက်
16 พ.ค. 2561 - 22:17 น.
သက်သေထွက်ဆိုအပြီး တရားရုံးကနေ ဒုတပ်ကြပ် နိုင်လင်း ပြန်ထွက်ခွာလာစဉ်
နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက် အက်ဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံ ထားရတဲ့ ရိုက်တာ သတင်းထောက် နှစ်ယောက်ရဲ့အမှုမှာ သူတို့ကို စာရွက်စာတမ်းတွေ ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဒုတပ်ကြပ် နိုင်လင်းကို မေလ ၁၆ ရက် ရုံးချိန်းမှာ တရားလိုပြ သက်သေ အနေနဲ့ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အင်းဒင်ကျေးရွာ လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို သတင်းထောက်တွေကို ဖုန်းဆက် ချိန်းဆိုပြီး ပေးခဲ့သူလို့ ဆိုတဲ့ ဒုတပ်ကြပ် နိုင်လင်းကတော့ ရိုက်တာ သတင်းထောက်တွေကို ဘာပစ္စည်း တစုံတရာမှ မပေးခဲ့ဘူးလို့ တရားခွင်မှာ ထွက်ဆိုသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သတင်းထောက်တွေကို သူက ဖုန်းဆက် ချိန်းဆို ခေါ်ယူခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးကသာ သူ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး လာရောက် တွေ့ဆုံဖို့ ပြောခဲ့တာလို့ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်တာ သတင်းထောက်တွေ အမှု ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်ကို စစ်ဆေး
ဒုရဲမှူးကို မယုံကြည်ထိုက်တဲ့ သက်သေအဖြစ် လျှောက်ထားမှု ပယ်ချခံရ
ဒီ့အတွက် ဒုတပ်ကြပ် နိုင်လင်းရဲ့ ဖုန်းအဝင်အထွက် စာရင်း (Call History)ကို မြန်မာ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကနေ တောင်းယူဖို့ တရားရုံးကနေ ဆင့်ခေါ်စာ ထုတ်ပေးစေလိုကြောင်း ရိုက်တာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ ရှေ့နေတွေက လျှောက်ထားတာကိုတော့ တရားရုံးက ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
ဒုတပ်ကြပ် နိုင်လင်းရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ကို စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်းထောက် ဝလုံးပြော
ရိုက်တာ သတင်းထောက်တွေကို ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းဆီးဖို့ စီစဉ်ရာမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပေးဖို့ ရဲမှူးချုပ် တင်ကိုကိုရဲ့ တာဝန်ပေး ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာ ဒုတပ်ကြပ် နိုင်လင်း ပါဝင်တယ်လို့ ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်က ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်းမှာ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်တာ သတင်းထောက် နှစ်ယောက် အဖမ်းမခံရခင် သူတို့ကို ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင် အပါအဝင် ရဲဝန်ထမ်း ၆ ယောက်က ရဲတပ်ရင်း ၈ တပ်ဖွဲ့ဝင်း အတွင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပြီး အဲဒီနောက်မှာ ရဲဝန်ထမ်း ၆ ယောက်စလုံး ယာယီ ထိန်းသိမ်းခံ ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်နဲ့ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ခင်မောင်လင်းတို့ နှစ်ယောက်ကို ဆက်ချုပ်နှောင် ထားခဲ့ပေမယ့် ကျန် ၄ ယောက်ကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန်မှာ ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်ဟာ ရဲစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ချမှတ် ခံထားရပြီး တပ်ကြပ်ကြီး ခင်မောင်လင်းကတော့ ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (ခ) (ဂ)အရ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်က ရာထူး တာဝန်ကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်လို့ ရဲတပ်ရင်း ၈ မှာ မရှိတော့ဘူးလို့ မှုခင်း စစ်ဆေးရေး အရာရှိ ဒုရဲမှူး မျိုးလွင်က တရားခွင်မှာ ထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရိုက်တာအမှု ဒုတပ်ကြပ် နိုင်လင်း သက်သေထွက်